Kedu ihe ndị kachasị emekarị na A9 Search Engine Optimization?
O nwere ike iyi ka ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla, ma ndị ahịa na-ere ahịa nwere ike ịchọta kpọmkwem ihe dị ha mkpa - naanị mgbe ndepụta ngwaahịa gị nwere ihe ọchụchọ niile dị mkpa nke jikọrọ ya na njụ-ajụjụ ọchụchọ jupụtara na onye nwere ike ịzụta ya. Ma nyere na ọdụm nke òkè nke usoro njikarịcha ọrụ na-arụ ọrụ fọrọ nke nta ka otu, Amazon A9 Search Engine njikarịcha nwere ụzọ dị iche iche na usoro. Ma ọ pụtara na e nwere ọtụtụ ihe mmejọ na-emekarị ọtụtụ ndị na-ere ahịa Amazon ka na-amaghị. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-ekpochapụ ihe omimi ahụ gbasara A9 Search Engine Optimization, ma gosipute gị nsogbu ndị kachasị njọ, dịka nzaghachi ugboro ugboro nke ọtụtụ ndị ọchụnta ego n'ịntanetị na-ere ahịa ha na ebe ahịa ahụ juru ebe niile. Ya mere, ka anyi bia n'ime!
Nzuzo: Backend Search Terms
Ihe bụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na Amazon kweere na ngalaba azu nke ndepụta ngwaahịa ha nwere ihe omuma nke isi ha (nke choro ighota ebe ha di na akuko aha ahia, ma obu na ngalaba nke akowara) bu ihe kachasi ala maka A9 Search Engine Optimization - busco modelos para fotografia 2013. Ha nile bu kwa ihe na-ezighi ezi. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ihe kachasị na nchịkọta isiokwu gị maka nchịkọta ngwaahịa gị, nke a bụ ụzọ ziri ezi nke ịchọtacha ngwaahịa gị (na ụda mgbada nke dị mkpa):
1) Akụrụngwa aha;
2) Ndepụta ihe edemede;
3) Okwu ọchụchọ Backend;
Nke ahụ bụ ya!
Nke abụọ: Na-etinye ihe nile n'otu ebe
M na-ekwu ebe a na n'ime ihe ndị kachasị emekarị na A9 Search Engine Optimization bụ ọnọdụ nkịtị karịa mgbe onye ahịa na-etinye òkè ọdụm nke isi ederede isiokwu - dị n'otu ebe, kama inwe ihe niile kewara n'ime ise ise. Ọ pụtara na ọ dịghị mkpa ịnye ihe niile ahụ mkpụrụedemede 250 na mpaghara ọ bụla, n'agbanyeghị ókè ị na-enye ya.
Ọ bụ ya mere ị na-elekwasị anya naanị otu akara pụtara na ị ga - agbaghara pasent 80% nke ohere ndị ọzọ fọdụrụnụ.
Nzọụkwụ atọ: Iji Same Okwu mee ihe ugboro ugboro
Dị ka Amazon si kwuo, ọ dịghị mkpa ka ịmepụta akụkụ ọ bụla nke ọdịnaya gị, bụ nke a chọpụtala na àgwà ọ bụla nke ngwaahịa gị.Ọ pụtara na ihe ọ bụla duplicative iji gị isi lekwasịrị Keywords - bụ ihe ọ bụla ma na-egbusi na dị oké ọnụ ahịa oghere. E kwuwerị, iji nhazi njirimara nke ngwaahịa gị na-eme ihe n'ụzọ ziri ezi na nke maara ihe ga-ahapụ ọnụ ụzọ meghere iji nweta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ma ọ bụ edepụta aha ma họrọ isiokwu maka ị ga-erite uru. N'ikwu ya n'ụzọ zuru ezu, ihe niile ị chọrọ ebe a bụ ịkọ isiokwu ọ bụla dị na ya n'otu ugboro (nke ahụ ga-ezuru ezu,) ma gaa n'ihu iji mejupụta akụkụ ndị ọzọ nke ngwaahịa ngwaahịa gị nke chọrọ njikarịcha maka usoro ọchụchọ ndị ọzọ.